Ọkụ Azụ Azụ Aquarium China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ọkụ Azụ Azụ Aquarium - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ọkụ Azụ Azụ Aquarium)
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Akụrụngwa Akụrụngwa Akụrụngwa Ngwa
ịkụ ihe ọkụ ọkụ na UL Nkọwapụta Ngwaahịa Isi ihe: PVC size: 100 * 178mm, ahaziri dị elekere: 4w, ahaziri aha voltage: 120v, ahaziri dị Max okpomọkụ: 42 ℃ agba: nwa, ahaziri oge ndu: ụbọchị 30 Anyị nwere ekele maka mmasị gị na ngwaahịa anyị Biko nye anyi ndụmọdụ n'okpuru Ama. maka amaokwu anyị ma kpọtụrụ anyị ka...
Egwuregwu Eletriki Ebere Igwe Na-ekpo Ọkụ Infrared
Egwuregwu Eletriki Ebere Igwe Na-ekpo Ọkụ Infrared Ọnụ ọnụ anyị na-ekpo ọkụ dị nnọọ mma ile anya, enwere ike iji akọ na-eyi uwe, n'okpuru akwa dịka ọkpụkpụ, ma ọ bụ ọbụna n'okpuru akwa akwa mberede ma ọ bụrụ na a họọrọ ya. Okpokoro Okpokoro isi na ubu gafee n'azụ olu na ala n'akụkụ ọ bụla ruo...
Egwuregwu Egwuregwu Ngwá Agha Nile Gbara Ọkụ
Egwuregwu Egwuregwu Ngwá Agha Nile Gbara Ọkụ Ebube ndị a zuru oke maka ihe ndị dị n'èzí dị ka egwuregwu football, ịkọ ugbo, ịgba golf, ịnya igwe, njem na ọtụtụ ọrụ ihu igwe oyi ndị ọzọ! Ihe ndị dị mkpa a na-ahụ anya, ndị na-egbuke egbuke na-adị ezigbo mma na nke dịgidere. A na-eji ogwe mmiri na-egbochi ihe onwunwe...
Ejiri Azụ na-eji Ngwongwo Na-ekpo ọkụ na EC
Ejiri Azụ na-eji Ngwongwo Na-ekpo ọkụ na EC Nkọwapụta Ngwaahịa Isi ihe: PVC size: 200 * 300mm, ahaziri dị elekere: 16w, ahaziri aha voltage: 120v, ahaziri dị Max okpomọkụ: 42 ℃ agba: nwa, ahaziri oge ndu: ụbọchị 30 Nkọwapụta ngwaahịa Ngwá ọkụ anyị na-emepụta ihe bụ otu n'ime ọrụ ndị kachasị mma ma bụrụ ndị a pụrụ...
PTC Fish Tank Aquarium Heater Factory
PTC Fish Tank Aquarium Heater E kwesịrị ịtụkwasị ihe dị na mbadamba mgbidi nke a na-edozi ma ọ bụ okpokoro mbadamba ka mbe ghara ịnọdụ ala Nkọwapụta Ngwaahịa Isi ihe: PVC size: 200 * 300mm, ahaziri dị elekere: 16w, ahaziri aha voltage: 120v, ahaziri dị Max okpomọkụ: 42 ℃ agba: nwa, ahaziri oge ndu: ụbọchị 30 Nkọwapụta...
Mkpụrụ ịmalite ịmalite Ọkụ
Okpokoro Okpokoro Ogwu Mmiri nke na-amị mkpụrụ na-amalite Okpomọkụ Ọkụ na-ebelata oge mmepụta site n'ịnọgide na-enwe ezigbo ọnọdụ okpomọkụ, na-eme ka ọnụ ọgụgụ na-arị elu na mmalite nke usoro ndụ nke osisi. Anyị na-enye akwa akwa dị iche iche, site na obere gaa na nnukwu. Ọdịdị ọ bụla dị. Nkọwapụta Ngwaahịa Isi...
PTC Fish Tank Aquarium Heater
PTC Fish Tank A quarium Submersible Ụlọ ihe nkiri Nye tankị gị na okpomọkụ kachasị mma na nkà na ụzụ kachasị elu. A na-eji ọkụ eletrik XHC na -eme ihe mpempe akwụkwọ dị iche iche nke na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ha ghara ịdị. N'ikpeazụ, ndị na-ekpo ọkụ XHC na-arụ ọrụ na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ, a na-eji ákwà elekere a...
Azụ Azụ Akpakpo Ibu Na Na Na Na Na Na Na Pet Ngwa
mkpụrụ na - amalite okpete ọkụ na EC, Ọ nwere ike na - ekpo ọkụ maka mkpụrụ ahụ, nyere ha aka ịmalite ngwa ngwa .Anyị eburu mbupụ na Europe na Australia na mbụ. Nkọwa: Mkpụrụ ọkụ na-amị mkpụrụ maka ka eto eto na mkpụrụ osisi germination Ebe mgbanyụ ọkụ na-agbanye mgbatị dị mita 10 ruo 20 karịa okpomọkụ Na-eme ka ihe...
Heat Pad Infrared Aquarium Tank Heat Pad Ngwaahịa
mkpụrụ na-amalite okpete ọkụ na EC, Anyị na-ebupụ na Europe na Australia na mbụ. Nkọwa: Mkpụrụ ọkụ na-amị mkpụrụ maka ka eto eto na mkpụrụ osisi germination Ebe mgbanyụ ọkụ na-agbanye mgbatị dị mita 10 ruo 20 karịa okpomọkụ Na-eme ka ihe ịga nke ọma nke seedlings na cuttings, mmegide na-ewu, mmiri na-adịghị ọcha ma dị...
Azụ tank na-etinye akwa na CE Rohs
Azụ anụ anyị na-eji akwa akwụkwọ na CE, ọ dị mfe nkwụnye ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na mbara ala nke terrarium maka ịmịnye ọkụ dị mfe.Ọ bụ ezigbo mma na ọnụahịa kacha mma, ịnakwere ịkpọtụrụ. Nkọwapụta ngwaahịa Nke a n'okpuru Azụ Azụ akụrụngwa akuku aquarium ka e mere maka ikpo ọkụ tank. N'elu ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ dị...
Azụ anụ ọkụkọ na UL
Azụ anụ anyị anyị na akwụkwọ UL, ọ dị mfe nkwụnye ọkụ ọkụ na ngwa ngwa na ala elu nke terrarium maka ịfefe ọkụ dị mfe Nkọwapụta ngwaahịa Nke a n'okpuru Azụ Azụ akụrụngwa akuku aquarium ka e mere maka ikpo ọkụ tank. N'elu ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ dị elu, ihe ntanye kpo oku nwere ike ịchịkwa ike na-akpaghị aka,...
Hydroponic Mkpụrụ Mkpụrụ Na-ada Mkpụrụ Na-amalite Mmiri Ọkụ
Nkwakọ ngwaahịa: CARTOON BOX ma ọ bụ OEM
Nkọwapụta ngwaahịa Chepụta maka mma osisi na ifuru mfri germination.Inbelata seedlings & cuttings cuccess maka veggies, herbs, ifuru osisi, wdg. Anyị kpo oku oku na-adị nwayọọ agha mgbọrọgwụ ebe iji melite germination. Ngwakọta kpo oku na-enyere m aka ịme ka ihe ịga nke ọma nke seedlings na cuttings, ngwangwa...
Ihe Ngwongwo Na-ekpo Ọkụ nke Infrared maka oche oche
Nkọwapụta ngwaahịa Igwe ihe nkiri a kpochapụrụ nke ọma a bụ ihe eji eme ihe ọ bụla maka oche ụlọ mposi . A na-eji ya n'ụlọ, ọfịs, ụlọ nkwari akụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, wdg. Kedu ihe nkiri kpo oku nke dị ọkụ? Igwe ọkụ kpụ ọkụ n'ọnụ, nke a maara dị ka ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ, bụ ihe ọkụkụ dị iche iche na-ekpo ọkụ na...
Nnukwu Azụ Azụ Azụ Azụ Maka Azụmahịa
Nkọwapụta ngwaahịa A na-eme ka a na-ekpo ọkụ akuku aquarium a maka ikpo ọkụ tank. N'elu ihe ọkụkụ dị elu nke na-ekpo ọkụ, ihe ntanetị nke kpo oku nwere ike ịchịkwa ike na-akpaghị aka, na-echekwa ọnọdụ okpomọkụ dị na mbara igwe ọbụna oyi oyi nchekwa kachasị na gị na anụ ụlọ gị. Tụkwasị na nke a, ihe onwunwe nke PET...
N'okpuru Azụ Tank ọkụ mats
N'okpuru ebe nchekwa nke tankị na-enye ike iji kpoo ọkụ na-eme ka ọbara gị sie ike. Ngwakọta nfe na-eji ngwa ngwa na-arịgo ngwa ngwa na ala elu nke terrarium gị maka ịfefe ọkụ dị mfe. Nkọwapụta ngwaahịa Nke a n'okpuru Azụ Azụ akụrụngwa akuku aquarium ka e mere maka ikpo ọkụ tank. N'elu ihe ọkụkụ na-ekpo...
Nkịta na-azụ okpomọkụ
Nkịta na-akpo ọkụ ọkụ na-ekpori ọkụ maka nkịta gị, na-azụ ha otú e si ehichapụ. Nkọwapụta Ngwaahịa Isi ihe: PVC size: 8 na X 18 n'ime , ahaziri aha elekere: 24w, ahaziri aha voltage: 120v, ahaziri dị Max okpomọkụ: 42 ℃ agba: nwa, ahaziri oge ndu: ụbọchị 30 Nkọwapụta ngwaahịa Ngwá ọkụ anyị na-emepụta ihe bụ otu...
ThermoTrek Ọkụ aka ọkụ
Nkwakọ ngwaahịa: kaadi ọnya
E nwere ọtụtụ ihe gbasara mmasị ọkụ ọkụ a. Ị nwere ike ịfanye ya site n'ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla, ọ na-abịa na eriri maka charing. A na - emepụta ikpe ahụ site na aluminom, na - eji eriri akpịrịgwụ iji chebe ngwaọrụ ma ọ bụrụ na ọ daa. Ọ ga-ewe ihe dị ka elekere isii site na ụgwọ, ọ ga-adịkwa mfe n'akpa, akpa...
Ọkụ na-ekpo ọkụ na Scooter ọkụ
Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke na-ahụ maka ịmepụta ihe ọkụkụ dịka 21years, anyị nwere ezigbo mma na ọnụahịa kacha mma. Nkọwapụta ngwaahịa Ọkpụkpụ aka anyị na-ekpo ọkụ na- enye gị ohere ịmezi ọnọdụ ọkụ ọkụ ka ị gharazie ịnagide okpomọkụ. Ọ dị mfe iji dabara. Ngwa ngwa ikpo ọkụ. Nye gị ọkụ na oyi Voltage: 12.5v, ọrụ...
Azụ anụ mmiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ
Eke: XHC-Ihe nkiri
Nkwakọ ngwaahịa: kaadị agba mpempe akwụkwọ / igbe akwụkwọ na igbe na Carton
Inye Ike: 80000pcs/month
Azụ anụ mmiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ F035D N'okpuru Ulo Igwe Ulo Okpomọkụ UL Ndị E Dere Ihe
Ntuzi Na-edozi Akpụkpọ anụ Na-eme Ka Ọkụ Na-ekpo ọkụ
Ntuzi Na-edozi Akpụkpọ anụ Na-eme Ka Ọkụ Na-ekpo ọkụ F035D N'okpuru Ulo Igwe Ulo Okpomọkụ UL Ndị E Dere Ihe
Obere Okpokoro Igwe Ọkụ Na-ekpo ọkụ na Akwụkwọ UL
Obere Okpokoro Igwe Ọkụ Na-ekpo ọkụ na Akwụkwọ UL F035D N'okpuru Ulo Igwe Ulo Okpomọkụ UL Ndị E Dere Ihe
Sistem Na-ekpocha Ọkụ Akara Sere
Nkọwapụta ngwaahịa Na-etinye obi ụtọ, ịke na nkasi obi n'ụlọ gị Na-esite n'okpuru ceramic tile, nkume, ma ọ bụ laminate flooring A nhọrọ okomoko mgbe imezi ime ụlọ ịwụ ma ọ bụ kichin Ngwongwo anyi nke ulo ala, bu PET nke kpochapu kpo oku, nke a bu uzo di elu nke ihe eji ekpo oku. Site na nnukwu ọnụego...
Ọkụ Azụ Azụ Aquarium Azụ Azụ Azụ Ejiri Ebu na OA Ọkụ ọkụ ọkụ Akuku Egwuregwu Akpu Azụ Aquarium Ike ọkụ ọkụ ọkụ aka Mmiri Ọkụ Mkpụrụ Azụ Azụ Azụ Azụ Mmiri Akwọ Ọkụ Ọkụ Na-ere Ọkụ mmanụ